विदेशबाट नेपालीको उद्धार गर्ने तालिका सार्वजनिक, कुन देशबाट कहिले ल्याइदैछ ? — Imandarmedia.com
विदेशबाट नेपालीको उद्धार गर्ने तालिका सार्वजनिक, कुन देशबाट कहिले ल्याइदैछ ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वभर अलपत्र परेका र नेपाल आउँ चाहेका नेपालीहरुलाई सरकारले उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने भएको छ । लकडाउनपछि विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनका लागि सरकारले समय तालिका नै सार्बजनिक गरेको छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र विदेशी जहाजहरुले उद्धार गर्नेछन् ।
नेपाल एयरलाइन्सका वाइडबडी र न्यारोबडी दुवै जहाज तथा हिमालय एयरलाइन्सको न्यारो बडी जहाज नेपालीहरुको उद्धारमा परिचालित गरिने छन् । सुचीअनुसार बिहीबार कुवेतको फ्लाइटबाट करिब ३ सय महिला श्रमिक फर्किंदै छन् । पहिलो चरणमा कुवेतमा अबैध ढंगले लुकेर बसेका र हाल त्यहाँको सरकारबाट आममाफी पाएर आश्रय क्याम्पमा बसिरहेका महिलालाई काठमाडौं ल्याउन लागिको छ। कुवेतबाट दुईवटा जहाजमा नेपालीहरु काठमाडौं आइपुग्दैछन् । एउटा फ्लाइट साढे ११ बजे र अर्को फ्लाइट दुई बजेतिर काठमाडौं आउने भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उडान तालिका अनुसार तत्कालका लागि नेपाल एयरलाइन्सको २४ र हिमालय एयरलाइन्सको १९ उडान हुनेछन् । साथै २४ वटासम्म विदेशी उडान पनि हुने तालिकामा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणका उडान मार्फत करिब ११ देखि १२ हजार नेपालीहरुलाई यसरी नेपाल ल्याइने छ। यी उडानपछि स्थितिको थप मुल्यांकन गरेर नयाँ निर्णय लिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तय गरेको तालिका अनुसार बंगलादेशको ढाकाबाट जुन १४ तारिखमा दुई वटा उडान हुनेछन । यी दुवै उडान विदेशी विमान कम्पनीका हुनेछन् । त्यसैगरि जुन १५ तारिखमा नेपाल एयरलाइन्सले माले र क्वालालम्पुरबाट नेपालीहरुलाई ल्याउने छ । सोही दिन हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरब र सिंगापुरका नेपालीहरुलाई ल्याउने काठमाडौँ ल्याउने छ ।
यत्सै जुन १६ मा युएई र कतारबाट नेपाल एयरलाइन्सले तथा कुवेत, र श्रीलंका र मालेबाट हिमालय एयरलाइन्सले नेपालीहरुलाई काठमाडौँ ल्याइने भएको छ । जुन १७ मा अष्ट्रेलिया, बैंकक र बहराइनबाट नेपाल एयरलाइन्सको उडान हुने छ भने हिमालय एयरलाइन्सले बंगलादेश र कतारबाट उडान भर्ने छ । जुन १७ मै अमेरिकाबाट एक विदेशी एयरलाइन्सको पनि उडान हुने पर्यटन मन्त्रालयलले सार्वजनिक गरेको उडान तालिकामा उल्लेख छ ।
जुन १८ मा नेपाल एयरलाइन्सले साउदी र युएईका नेपालीहरुलाई काठमाडौं ल्याउने छ । सो दिन हिमालय एयरलाइन्सले क्वाललम्पुर र मस्कटबाट उडान भर्ने छन् । यस्तै जुन १९ मा जापान र कुवेतबाट नेपाल एयरलाइन्सले तथा साउदी र नाइजेरीबाट हिमालय एयरलाइन्सले उडान गर्ने छन् ।
यस्तै २१ जुनमा दक्षिण कोरिया र मस्कट (ओमान)बाट नेपाल एयरलाइन्सले नेपालीहरुको उद्धार गर्ने छ । कुवेत र क्वालालम्पुरबाट हिमालय एयरलाइन्सले जहाजको उडान हुने छ । २२ जुनमा अष्ट्रेलिया र बैंककबाट नेपाल एयरलाइन्सको तथा पाकिस्तान र कतारबाट हिमालय एयरलाइन्सको उडान हुने छ । २३ जुनमा जापानको नारिता र मालेबाट नेपाल एयरलाइन्सको तथा युएई र युगान्डाबाट हिमालय एयरलाइन्सको उडान हुने तालिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै २४ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको मात्र फ्लाइट छ । सो दिन नेपाल एयरलाइन्सले साउदी र कुवेतका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्ने छ । २५ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडीले जापानका नेपालीलाई उद्धार गर्दा हिमालय एयरलाइन्सले साइप्रस÷इजरायलबाट उडान गर्ने छ । यी उडान तालिका यात्रुको उपलब्धताको आधारमा परिवर्तन पनि हुन सक्ने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै ८५ प्रतिशत यात्रु भएमात्र उडान हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यात्रुहरुले पीसीआर वा आरडीटी नेगेटिभ रिपोर्टको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।